Eduze kwedayi we-infrared akhombisa ukumuncwa kokukhanya endaweni eseduzane ye-infrared ka-700-2000 nm. Ukumuncwa kwabo okukhulu kuvame ukuvela ekudlulisweni kwenkokhiso kudayi ophilayo noma insimbi eyinsimbi. Izinto zokumunca eduze kwe-infrared zifaka odayi be-cyanine abane-polymethine enwetshiwe, udayi we-phthalocyanine ...
Imibala yokuphepha ye-UV fluorescent
Lapho ingaphansi kokukhanya okubonakalayo, i-UV fluorescent powder imhlophe noma icishe ibe sobala, ijabule ngamaza we-wavelengths ahlukene (254nm, 365 nm) akhombisa umbala owodwa noma ngaphezulu we-fluorescent, Umsebenzi oyinhloko ukuvimbela abanye ekwenzeni mbumbulu. Luhlobo lwe-pigment enobuchwepheshe obuphezulu, nombala omuhle ofihliwe ....
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka i-pigment ye-photochromic, i-pigment thermochromic, i-UV fluorescent pigment, i-pearl pigment, i-pigment emnyama, i-optical interference pigment variable, ithandwa kakhulu ekugqokeni, uyinki, ipulasitiki, upende, kanye nemboni yezimonyo. Siphinde futhi sinikeze futhi sikwenze ngokwezifiso le dayi nop ...